Milmaan / Isku dar / biir YouTube (FLV) Videos
2 YouTube Video ayeey Software & Apps
3.4 Motion gaabis ah
YouTube waa goobaha video ugu caansan adduunka. Waxaa laga yaabaa inaad soo bixi xamuulka ah videos ka website-kan. Laakiin sida ay u wada midowdo si aad u ciyaari karaa dhammaan videos YouTube sida mid ka mid ah oo ku saabsan PC, qalab, ama TV-ga? Halkan xirfadle YouTube midoobeen waxaa lagu soo bandhigay in Qaybta 1aad ee si aad u fudud u buuxiso shaqada. Haddii aad dooneyso inaad ku biirto videos in horay uploaded in YouTube, ka Video Editor YouTube kaa caawin karaan in.
Qaybta 1aad: Sida loo midowdo soo bixi YouTube Videos
Qeybta 2: Sidee inay la midowdo YouTube Videos Online
Tool aad u baahan tahay: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa video tafatirka qalab si sahlan loo isticmaalo. Sidaa daraadeed, YouTube videos si toos ah ugu biirtay doonaa habsami la'aan galisa. On top of in, waxaad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya laba YouTube videos si aad videos dheeraad ah oo ku habboonaanta. Waxa kale oo ay awood u aad si fudud u samayn ah sawir-in-sawir (PIP) video , oo hab kale hal abuur leh inay la midowdo YouTube videos xaqiiqdii waa.
Weey wanaagsan tahay? Waxaa Download hadda iyo isticmaalin, YouTube midoobeen inay la midowdo oo dhan videos aad YouTube.
Tallaabada 1. files Import YouTube barnaamijka
Download iyo rakibi Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor). Waxa ay ku siinaysaa taageero aad u fiican ee lagala soo bixi videos YouTube (sida caadiga ah qaab FLV). Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Import" on daaqadaha hoose dooro YouTube video files ka your computer, ama si fudud u jiidi oo hoos u YouTube video files ka File Explorer si User ee Album.
Tallaabada 2. Jiid jeedi YouTube videos in ay ku milmaan
Si aad isugu misho YouTube videos, xulo badan YouTube videos in User ee Album by haysta hoos Ctrl ama wareeg muhiimka ah, ka dibna jiidi oo iyaga hoos u track video on Timeline ah. Dhammaan files YouTube ku biiri doona mid kale ka dib markii aan galisa oo mana jiro mid guurka by default, laakiin waxaad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya video clips sida aad rabto. Tani waxay la soo bandhigayaa in Tallaabada 3.
Tallaabada 3. midowdo YouTube videos la kala guurka
By ku daray kala guurka, YouTube videos duuli doona xunna ka mid xiga. In sidaa la yeelo, beddelaan si ay u kala guurka tab, iyo jiidi kala guurka ah ayaa doonay inay Timeline ah. Haddii kale, xaq guji guurka kasta oo ay doortaan "waxay khuseeyaan dhammaan" iyo "Random in All" ka menu gujisid si ay u dar-guurka ee u dhexeeya YouTube videos in ilbiriqsi.
Tallaabada 4. midowdo badan YouTube files mid
U hubso in aad ku qanacsan tahay wax walba. Button Play Waxaad riix kartaa in ay ku eegaan sida YouTube videos la biireen doonaa. Haddii natiijada wanaagsan yahay, guji "Abuur" badhanka si loo badbaadiyo video YouTube sida mid ka mid ah. Sidaa darteed, waxaad tagtaan dalka "Qaabka" tab iyo dooro mid qaab la doonayo oo guji Abuur inuu ku soo bilowdo biirtay YouTube videos. By jidkii, haddii aad rabto in aad ka ciyaari faylasha YouTube ku biireen on iPod, iPhone, iPad, doortaan "Device" dooro qalab aad ka mid ah liiska. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa dib u YouTube wax qaybsi ama gubi in DVD u ciyaaro on TV.
Video Tutorial: Sida loo midowdo YouTube Videos
Tool aad u baahan tahay: YouTube Video Editor
YouTube Video Editor waa video editor browser-ku-saleysan saartay YouTube laftiisa. Waxaa isticmaala u saamaxaaya in ay sameeyaan itusi yar videos ay uploaded gal YouTube, iyo sidoo kale isku darsamaan dhowr clips wada mid. Waxay u baahan tahay ma software dheeraad ah, ama browser fur-tago (sokow Adobe Flash ee), taas oo ka dhigaysa waxaa habboon in la isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ka maqan qaababka badan aasaasiga ah ee casriga ah macaamiisha maalin software video tafatir ah oo inta badan bidbidayaan halka la files video badan oo wax looga qabto.
Hel helitaanka Tifaftiraha
Gudaha gal si aad YouTube (ama Google) xisaabta. Guji "Upload" >> "Edit" u Video Editor tab.
Videos on Place waqtiga
Si fudud u jiidi videos u baahan midowdo gal waqtiga ama ku dhacay icon lagu daray ee geeska gacanta midigta sare ee clip kasta.
Dib u natiijada. Haddii lagu qanco, dhufatey "naadiya" badhanka si loo badbaadiyo goobaha.
Sida loo Edit YouTube Faylal ay la Video Editors kala duwan YouTube
Sidee ayaan u isticmaalaa Adobe jilitaankii geliyaan YouTube Videos?
Sidee loo Diiwaan Audio ka YouTube
> Resource > YouTube > Sidee inay la midowdo / Isku dar / biir YouTube (FLV) Videos